Izenzo Zenkolo Eziguquliwe
Izinkolelo zaseBasotho nezimfundiso mayelana nokufa kanye nokulandela impilo ziye zathonywa ukushumayela ivangeli lobuKristu. Ngenxa yalokho, imfundiso ye-Basotho, izinkolelo nemikhuba eguquliwe ishintshiwe ngokuhamba kwesikhathi. AmaBasotho akholelwa ukuthi umuntu (umuntu) unezici ezimbili: umzimba (body) noma inyama (nama), nomoya ongangenawo umoya (umoya, futhi igama lomoya) noma isithunzi (seriti). Umzimba ungokwemvelo futhi ungaphansi kokufa nokubola, kodwa umoya awunakunqotshwa futhi awufi. Ngesikhathi sokuphila umoya uhlala emzimbeni, abanye bakholelwa ukuthi usezinhliziyweni, abanye bekhanda, kodwa umbono ovamile ukuthi unelungelo lomzimba wonke. Umoya ungashiya umzimba ebusuku bese ujikeleza, amaphupho abe ukubonakaliswa kwalezi zihambi. Abathakathi nabaphangi bangenza imimoya yabo ishiye imizimba yabo ngentando futhi iqondise imisebenzi yabo.
Ekufeni, umoya ushiya umzimba bese uhamba eduze. Kuze kube yilapho ithuna lisibekiwe, umoya usengozini njengoba ungashintsha uma ulimi lomuntu oshonile lunqunywe noma umgogodla oqhutshelwa ekhanda ngamadoda ukuba enze imithi eqinile. Ukuze uvimbele lokhu, umzimba uphathwa ngemithi ekhethekile kanye nokugada okugcinwe kuyo kuze kube sekungcwabeni. Ngemuva kwemihlangano yomngcwabo yokugcina eseqediwe, umoya uhamba futhi uqhubeke, abanye bakholwe, ekhaya lasendulo eNtsuanatsatsi noma, abanye bakholwa, ekhaya elisezulwini. Imimoya ingaba yinto enesihluku noma enomusa. Kungenxa yalesi sivuno esingokomoya ukuthi umkhuba wokukhulekela okhokho ususelwe.
Ngokwesiko iqembu ngalinye lalibhekwa njengelingaphansi kwethonya eliqondile kanye nokuvikelwa kwalabo okhokho (balimo) kanye nekhanda njengelonke ngaphansi kwalabo okhokho benduna.
Ukukholelwa ekutheni ukhokho wathonya ekuphileni kwansuku zonke kuvamile, ikakhulukazi ekuguleni. Yonke isifo esasetshenziselwa ukuba sithathwe kubazali, ababekholelwa ukuthi babangela ukugula kwabaphilayo ukuze babangele ukufa kwabo, ngaleyo ndlela bathole ubungane ezweni elingokomoya. Namuhla nje kuphela izifo ezimbalwa, isb. ukuzithemba, ukulala nokushona, okushiwo abanye okhokho babo ngokuqondile. Bakholelwa ukuthi lezi zingaphulukiswa ngokuncenga imimoya nokubuyisela ubuhlobo obuhle, ngokunikela ngesilwane, noma ngokwenza umsebenzi ongakunaki. Ngakolunye uhlangothi, iBasotho iyaqhubeka ikholelwa ukuthi, ngokujwayelekile, okhokho badlala indima ebalulekile ekuphulukeleni izifo ezihlukahlukene nezifo. Usizo lwabo luvunywa ngokubhula ngudokotela (udokotela), lapho ikhambi lembulwa.
Abahlengikazi baBasotho Nabelaphi Bamoya
I-ngaka inethonya elikhulu emphakathini wendawo yaseBasotho. Uhlonza futhi ubeka izixazululo ngezifo ezijwayelekile nezifo, ukunciphisa nokuvimbela izinselele, ukuvikela olwabuthakathaka kanye nengozi futhi uletha inhlanhla nokuchuma. I-ngaka isiza ezimweni abantu abangakwazi ukuzilawula zodwa, noma lapho bazizwa bephephile. Ukuze enze lokhu, usebenzisa imishanguzo eyenziwe ikakhulukazi emifino, emagxolo, kwezinye izinhlobo zezitshalo nezilwane. I-ngaka ijwayele ukubuka isifo nokuphathwa kwayo ngokomzimba, ngakho-ke, okuncane, uma kungenjalo, isenzo senziwa okungaphezu kwemvelo.
I-selaoli ihlukanisa izifo ngokuphonsa amathambo, amagobolondo njll Ngokuya ngesimo sabo nendawo, i-selaoli ihlolisisa ukugula kwesiguli futhi ihumusha ukwelashwa. Le ndlela ngokuvamile ixhomeke ekuthonyeni kwezimo ezingaphezu kwemvelo nokucela umlingo. Ukwelashwa kuhlose ukuthembela kakhulu emzimbeni nangokweneliseka kwemimoya ekhubekile, ngokusebenzisa imihlatshelo kanye nokugcinwa kwamathambo, kunemithi. I-seneno ngumuntu ongabona ukuthi abanye bangakwazi yini, okumenza akwazi ukuthola izifo nokubikezela izenzakalo ezizayo.